अमेरिकी आर्मीमा काम गरेका मेकेन्द्रले भावुक हुँदै सुनाए यस्तो मार्मिक घटना ( भिडियो सहित ) – " सुलभ खबर "
MCC को आर्मी मा काम गरेको मेरो अनुभव ।। MCC राम्रो छैन ।।।
Posted by Mekendra Bhusal on Wednesday, January 15, 2020
के तपाईंको घाँटी लामो समय देखि दुखिरहेको छ ? हुनसक्छ यस्तो गम्भीर समस्या, थाहा पाइराख्नुस् !
३० बर्ष नाघीसकेपछी पुरुषलाइ देखिन्छ रोगी हुने यस्ता संकेत।बेलैमा थाहा पाएर सचेत रहनुहोस
किन आउछ त आँखामा आँसु ? थाहा पाउनुहोस